चितवनमा निषेधित क्षेत्र घोषणा, प्रदर्शनमा रोक - अभियान खबर
चितवन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले चौबिसकोठीदेखि मालपोतचोकसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । साउन २० गते आत्महत्या गरेका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मोबाइलमा रहेको भिडियोका आधारमा पक्राउ परेका पत्रकार रवि लामिछानेसहित तीनजनालाई आज पनि अदालत उपस्थित गराउने तयारी छ ।
रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता कार्की पक्राउको विरोधमा निरन्तर प्रदर्शन भएपछि एक किलोमिटर क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो । निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन तथा मानिसको हुलहुज्जत गर्न निषेध गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । चौबिसकोठीदेखि मालपोत चोकसम्म अस्पताल, अदालत, प्रहरी कार्यालयलगायतका कार्यालयहरु रहेकोले सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको प्रहरी प्रमुख दानबहादुर मल्लले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ – पहिलोपटक मानव निर्मित भूउपग्रह प्रक्षेपण भएको ६ दशकपछि नेपाल ‘अन्तरिक्ष युग’मा प्रवेश गर्दै छ । अमेरिकाको भर्जिनिया वाल्लोप्स द्वीपस्थित ‘मिड एट्लान्टिक रिजनल स्पेसपोर्ट’ बाट ‘नेपाली स्याट–१’ नामक नानो स्याटलाइट (सानो भूउपग्रह) अन्तरिक्षमा पठाउन लागिएको हो । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छत्र कार्कीले लेखेका छन् । नेपाली नानो स्याटलाइटको संरचना एक घन इकाइ […]
हेर्नुहोस् आजको राशिफल २०७५ असार १४ गते बिहीबार
Posted on June 28, 2018 Author abhiyaan
आज वि.सं. २०७५ साल असार १४ गते बिहीबार, तदनुसार ई.सं. २०१८ जुन २८ तारिख मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) मिश्रित प्रभाव भएको दिन छ । काम रोकिनुका साथै मानसम्मानमा आघात पुग्न सक्छ । फाइदा कममात्र हुनेछ । आफ्ना कामजोरीमाथि टिप्पणी हुनसक्छ, सचेत रहनुहोला । बोलीको गलत अर्थ लाग्नाले सहयोगीहरू टाढिन […]